Nuxurka Warbixin Dhinacyo Badan Taabanaysa Oo Wakiilka Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya Ka Jeediyey Golaha Amniga. | Baligubadlemedia.com
Nuxurka Warbixin Dhinacyo Badan Taabanaysa Oo Wakiilka Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya Ka Jeediyey Golaha Amniga.
Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating, oo la hadlay golaha amniga qaramada midoobay ayaa sharaxay waxyaabaha soomaaliya ay ku guuleysatay iyo caqabadaha ku gudban maamulka madaxweyne Farmaajo, muddada sannadka ku dhow ee uu xilka hayo.
Keating wuxuu qiray in Soomaaliya ay weli wajeheyso dhibaatooyiin badan oo u baahan in laga caawiyo.
“Sida dowladaha kale ee cusub, wuxuu weli ku jiraa barbarasho,” ayuu yidhi Keating, wakiilka gaarka ah ee
xoghayaha guud u qaabilsan Soomaaliya.
Balse Keating wuxuu sheegay in dowladda ay la timi ajande wanaagsan oo la xidhiidha dhaqalaha, siyaasadda, xallinta khilaafaadka iyo wax ka qabashada arrimaha amniga.
“Diiradda wuxuu hadda saaran yahay howsha aasaasiga ah ee la wareegidda dhanka amniga”, ayuu yidhi oo sidoo kale tilmaamay “in dowladda federaalka ay meelmarinta qorshayaashan ay kala kulmeysaa caqabado waaweyn”.
Wuxuu intaa ku daray markii uu ka hadlayay caqabadaha waxa ay yihiin: “Mid waa abaabulka farsamada iyo awoodda dhaqaalaha. Midna waa isku xidhka wada jirka ah ee hay’adaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah”.
“Midda saddexaad waa in si guul ah loo maareeyo awoodda qeybsan oo hal dhinac laga dhigo; Waxaa ka mid ah maamul goboleedyada, xildhibaannada, dadka siyaasadda qabaliga ah kala gala, laamaha gaarka ah iyo beesha caalamka”, ayuu yidhi Keating.
Waxaa muddo soo taagnaa khilaaf wayn oo u dhexeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
“Waxaa jiray xilli ay aad isugu xumaadaan dowladda federalka iyo maamullada, sannadkii tagay. Hadda xidhiidhku waa la isu soo dhoweeyay”, ayuu yidhi Keating oo khudbo u jeediyay golaha amniga ee Qaramada Midoobey oo warbixin kooban ka siinayay xaaladda dalka.
“Qaabka iyo dhismaha hannaanka federaalka ee Soomaaliya weli waxaa ka taagan dood wayn, balse go’aanka cusub ee dowladda iyo maamul goboleedyada ee ah in laga wada shaqeeyo baahida Soomaaliya, waa mid muhiim ah si guul looga gaadho dhinac kasta”.